Xubinta maanta oo kale maxaa ka dhacay K/cagta oo aan ku soo qaadanayno sagaal sano ka hor kulankii Manchester derby – Gool FM
Xubinta maanta oo kale maxaa ka dhacay K/cagta oo aan ku soo qaadanayno sagaal sano ka hor kulankii Manchester derby
(Manchester) 17 Abriil 2019. Aqristayaasheenna sharafta leh ku soo dhowaada xubinta maanta oo kale maxaa ka dhacay kubadda cagta, waxaana maanta ku soo qaadanaynaa kulankii dhacay sagaal sano ka hor ee Manchester Derby.
Maanta oo kale 17 bishii April sanadkii 2010-kii, kulanka Manchester Derby ayaa dhexmaray kooxaha isku Magaalada ka dhisan ee Manchester City iyo Manchester United, waxaana daqiiqadii ugu dambeysay guusha heshay Naadiga Man Utd.
Kulankan ayaa ku dhammaaday 0-1 oo ay ku soo adkaatay Manchester United oo marti ahayd, waxaana goolkaas u dhaliyey Paul Scholes.
Scholes ayaa ilaaliyey rajay ay Manchester United ugu guuleysan kartay horyaalka Premier League, kaddib markii ilbiriqsiyadii ugu dambeeyey uu gool ugu shubay kooxda Manchester City.
Kulankan waxaa goob-joog ka ahaa oo u soo daawasho tagay 47,019 oo taageerayaal ah, waxaana dhex-dhexaadinayey garsoore Atkinson.
Waxaa kulankan lagu xusuustaa in Gary Neville uu dhunkaday Paul Scholes kaddib markii uu 93-daqiiqo dhaliyey goolka guusha kulankan Manchester derby.
Ma ogtahay in safkii xalay ee kooxda Ajax oo dhan uu kaga safasho badan Cristiano Ronaldo tartanka Champions League inkastoo ay reebeen!?